२४ घण्टामा १,७०५ जना काेराेना संक्रमित डिस्चार्ज, १४४ जना नयाँ संक्रमित थपिए
ब्लाष्टखबर । पछिल्लाे २४ घण्टामा नेपालमा १ सय ४४ जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे छ । याेसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या १६ हजार ९ सय ४५ पुगेको स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जोगेश्वर गौतमले बताएका छन् ।
आज १ हजार ७ सय ५ जना संक्रमित निकाे भइ डिस्चार्ज भएका छन् । यस सँगै हाल सम्म डिस्चार्ज हुनेहरूकाे संख्या १० हजार २ सय ९४ जना पुगेकाे डा. गौतमले जनाएका छन् । उनले ६ हजार ६ सय १३ जना काेराेना संक्रमपतकाे विभिन्न अस्पतालका अाइसालेसनमा राखि उपचार भइरहकाे पनि जानकारी दिएका छन् ।